Halloween Baby Phone Game app para iPhone - Descarga para iOS de
Halloween Baby Phone waa mid ka mid ah ciyaarta ugu fiican muusikada phone caruurta. Waa a edition Halloween gaar ah la interface sahlan oo fudud, Saamaynta dhawaaqa soo jiidasho iyo xiiso leh si ay u isticmaalaan. Halkan in this ciyaarta, phone ilmahaaga in u ciyaaro heeso Halloween marka ilmuhu taabto uu furayaasha tirada jecel oo ka dhigaysa wicitaanada been abuur ah. Waxaa jira tan oo songs Halloween kala duwan in u ciyaaro marka uu ilmuhu ka dhigaysa call been abuur ah. Waxa kale oo aad ku raaxaysan karaan video ah songs Halloween oo iska tuur ah mashquuliya jilayaasha yihiin oo dhan loogu talagalay in ay sii ilmaha ku shuqloonyihiin Nicmo muddo dheer. Play oo wuxuu ku raaxaysan this xiiso Halloween codadka ciyaarta in ay qabsadaan dareenka aad caruur iyo waxa la saaxiibo aad ugu fiican wadaagaan.About Gameiva
Gameiva aad u curiyay ugu dambeeyay ee ugu qaybaha jecel kulan iyo apps kuwaas oo dhan si weyn u jeclaayeen kids keenaa. Waxaan gebi Nagi si ay u dhisaan user kulan saaxiibtinimo la xiriira xiiso leh iyo barashada familiarities waxbarasho wanaagsan iyo Raaxo kids. Nala joog, waayo, updates ugu dambeeyey ee Gameiva.
noo keen at: http://www.gameiva.com/na raac on daray Google: https://plus.google.com/u/1/103216636896495275888/postsna Like: https://www.facebook.com/GameivaGamesna raac: https://twitter.com/GameIvaDaawo videos ciyaarta our: https://www.youtube.com/channel/UCi8kgM_D4XgQPgYYA8BPnKA
Annagu waxaannu noqon doonnaa oo aad jawaabta ku faraxsanahay. Nala soo xiriir mar walba wixii su'aalo iyo talooyin at wecare@gameiva.com.